Kungakhathaliseki ukuthi sishade iminyaka engu, noma asalokhu izigaba zokuqala sobuhlobo, yonke imibhangqwana Ungazuza esikhathini sekhwalithi esichithwa ndawonye. Kumnandi ikakhulukazi ukwenza umzamo for Day Valentine sika. Ukuhamba ngesitimela kuyindlela ephelele ukuze uqale ukuthandana futhi kukankosikazi yokubaleka nomunye wakho othandekayo. Sheshisa buthule emaphandleni noma izintaba. Unqamule esidlule ebukekayo, amadolobha lasendulo noma ogwini lwasenyakatho-a glacial echibini. Nazi phezulu 5 kakhulu romantic isitimela amade Europe. Ngamunye unikeza okuthile okukhethekile Day Valentine.
Qala isitimela uhambo lwakho romantic Zurich. Vakashela Bahnhofstrasse, omunye kakhulu ezikhangayo yezitolo ezitaladini emhlabeni, futhi uthenge Memento. Marvel ngesikhathi imisebenzi esiphawulekayo Van Gogh futhi Monet ngesikhathi okuningi babemthanda Kunsthaus art igalari. Kuningi kakhulu imibhangqwana okufanele ikwenze eZurich ngaphambi kokuzithela ebukekayo ngesitimela ukuze Innsbruck. Izikhangibavakashi ngasogwini lomfula Lake Zurich ekufezeni emangalisayo Alpine kwenkundla. Uzophinda idlule langa izimfunda entabeni futhi vistas emangalisayo. Yini kungaba romantic more?
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#romance London romantic zothando travelflorence ukulele travelparis travelrome travelvenice